Ukuhlala Kwasemaphandleni e-Old Tackroom - I-Airbnb
Ukuhlala Kwasemaphandleni e-Old Tackroom
Guestwick, England, i-United Kingdom
Inqolobane ibungazwe ngu-Grant
U-Grant Ungumbungazi ovelele
Sihlinzeka ngezindawo zokuhlala zasemaphandleni zomhambi wesimanje. I-Old Tackroom igcwele izinto eziqabulayo ezenza yamukeleke futhi ithokomale, indawo ekahle kakhulu yokuphumula ngemva kosuku lokuthola i-Norfolk. Indawo yokuhlala isethwe egcekeni lethu elidala elizinzile endlini yesonto i-Guestwick futhi inendawo yayo yegceke elivikelekile, indawo yokuhlala engena endlini yethu. Sithemba ukuthi sizoba nesitolo esincane sasepulazini maduzane ukuze izivakashi zikwazi ukuthenga umkhiqizo wendawo ngesikhathi sokuhlala kwazo nezipho zokuya ekhaya.
Indawo yokuhlala yohlelo oluvulekile inosofa, i-Log Burner, i-TV (ku-inthanethi hhayi kuphela), itafula elincane nezihlalo, ibha yesidlo sasekuseni, indawo yekhishi enehhavini, i-hob, usinki, ifriji, ifriji, ifriji yewayini, i-toastie maker, i-kettle ne-toaster. Wonke amashidi namathawula kuzonikezwa. Igceke langaphandle eliphephile lezinja. Isitoreji esiphephile samabhayisikili/amarekhi ophahla/imishini yasebhishi/ama-paddle/amabhodi okutshuza emagagasini, sicela ubuze ukuthi uyakudinga yini lokhu.
I-BBQ namabhayisikili agcinwa kude sicela ubuze ukuthi ungathanda yini ukuwasebenzisa futhi sizowafaka egcekeni lakho.
Sinenhlanhla enkulu ngendawo yethu ekahle kakhulu yokuhamba, ukuhamba ngebhayisikili (umzila womjikelezo 1) sibonakala sisemaphandleni kakhulu futhi sinezindawo ezizungezile, amapulazi kanye nesonto. Kodwa-ke, ukushayela imizuzu engu-10 kunoma yiluphi uhlangothi kuzokuletha emgwaqeni oyisithupha osuka e-Norwich uya ogwini futhi uyakwazi ukufinyelela kalula yonke i-Norfolk ohambweni losuku. I-Blakeney yidolobhana eliseduze nathi elisogwini ngemizuzu engu-25 futhi i-Holkham ne-Wells ikude ngemizuzu engu-45. Uma uthanda izilwane zasendle uCley noSreonouse kumelwe nakanjani ube nemizuzu engu-25 kuphela. I-Reepham yidolobha elihle lase-Georgia eliqhele ngamakhilomitha angu-6 ngezitolo zokudla ezinhle kakhulu kanye nezitolo zendawo. Idolobhana elingokomlando lase-Heydon lisondelene kakhulu futhi line-pub ethandekayo yezwe, idolobhana eliluhlaza, amakamelo wetiye, indawo yokubhaka ye-pizza eyenziwe ngokhuni, indawo esanda kulungiswa ngemuva kwe-pub ene-salon yobuhle, i-florist, izitsha zasekhaya kanye nezitolo zezingubo. I-Holt yidolobha eliphithizelayo elinezitolo eziningi zekhofi nezitolo zezipho. Zungeza yonke indlela eya e-Norwich emzileni womjikelezo 1 noma ushayele edolobheni (imizuzu engu-30) lapho imibukiso, isidlo sakusihlwa, ukuthenga kanye namasonto kuzokugcina ujabulile.
Awekho amasevisi edolobhaneni lethu (Isitolo sasepulazini njengamanje siyaqhubeka)
Ikamelo elidala lokubambelela liseduze nendlu yethu futhi wamukelekile ukuthepha emnyango wethu wangaphambili noma nini lapho udinga okuthile, sinezingane ngakho kungcono ngaphambi kuka-9pm uma kungenzeka. Siyajabula ukunikeza ukusikisela uma udinga noma yikuphi. Siyajabula ukuthi ube nenombolo yethu uma kwenzeka kuba nezimo eziphuthumayo. (Imininingwane yendawo isencwadini yethu yeziqondiso kanye nekhasi lethu le-instagram @church_house_guestwick_norfolk).
Ikamelo elidala lokubambelela liseduze nendlu yethu futhi wamukelekile ukuthepha emnyango wethu wangaphambili noma nini lapho udinga okuthile, sinezingane ngakho kungcono ngaphambi…
UGrant Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Guestwick namaphethelo